Ubufakazi beGAAPP - Global Platform Allergy & Airways Patient Platform
Ubufakazi beGAAPPIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-19T14:20:44+02:00
I-GAAPP isebenze nezinhlangano eziningi ezilwela ukwenza ngcono inhlalakahle yeziguli ezinokungezwani nezinto ezithile, i-asthma, nezinye izifo ze-atopic. Okwethu izinhlangano zamalungu ukufinyelela izinsiza ezahlukahlukene futhi usebenze nathi ukufeza izinhloso zethu ezifanayo.
Nakhu okushiwo ezinye izinhlangano zethu ezingamalungu:
Selokhu ngaba yilungu lenhlangano yeGAAPP, ngihlangane nabantu abaningi abahle kakhulu kubandakanya uMongameli, iBhodi labaqondisi, nabanye abaningi abakha umndeni weGAAPP. Le nhlangano ihlinzeka ngemfundo kanye nokukhuthaza abantu abanezifo zokuphefumula kuzo zonke izizinda zempilo, nakuwo wonke amazwekazi emhlabeni jikelele - okuyikho okwenza le nhlangano ibe ngeyomusa. Ukugqamisa inhlangano yethu kwasekuqaleni ngokubeka amavidiyo ethu kanye namaphosta aphathelene nokufundiswa kwesifuba somoya ezindaweni zokuxhumana ze-GAAPP kusinikeze inkundla enkulu yokukhuluma kusuka lapha e-US GAAPP izimisele ukusebenzisana nezinye izinhlangano ukuletha ushintsho oluzonika amandla abantu abanezifo zokuphefumula ukuze babe ngabameli babo futhi bazwakale amazwi abo, ukuletha ushintsho kuzinqubomgomo zokuthi ukunakekelwa kwezempilo kuhanjiswa kanjani. Kuyinjongo yabo ukunciphisa umthelela wokwaliwa yizifo, i-asthma, ne-urticaria onayo ezimpilweni zeziguli.
ILaonis Quinn MSN RN AE-C, Phefumula u-Anthony J Chapman Asthma Foundation
I-Institut Atopika yinhlangano engekho kuhulumeni emele iziguli ezine-atopic dermatitis, i-asthma, i-allergies nezinye izimo zezokwelapha ezihambisana nazo eSlovenia, futhi siyabonga kakhulu ngokuba yilungu le-GAAPP. Ngosizo lweGAAPP, kulula ngathi ukuthi sihlale sinolwazi ngemicimbi yamanje, ukuqeqeshwa kanye nezindatshana zesayensi ezisanda kushicilelwa ngentuthuko ebalulekile kwezokwelapha. Nge-GAAPP, singaxhumana nezinye izinhlangano emhlabeni wonke kanye nababambiqhaza ababalulekile. Siyinhlangano encane engenakho ukwesekwa okujwayelekile kwezezimali futhi ngayo yonke imisebenzi yethu efezwa amavolontiya. Ngalokhu, i-GAAPP ingasebenzisana ngezimali nezinhlelo zethu, esivumela ukuthi sinikeze abasebenzisi bethu izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
UTina Mesaric, I-Atopika
Ukuba yingxenye yeGAAPP kuyigugu enhlanganweni yethu njengoba kusisiza ukuthi sikhule - sibonga inethiwekhi yezinhlangano zamazwe omhlaba nezinye izinhlangano zeziguli eziyidalayo. Le nethiwekhi inika ithuba lokuxhumana futhi uthole ukuthi sinemishini efanayo futhi singasebenza ndawonye ukufeza inhloso eyodwa. Ithuba lokuhlangana kanye namaqembu eziguli asebenza ndawonye ekugcineni kusiza ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yeziguli zethu - ngokusinika izinsiza ezingafinyeleleki e-Italy. Ukuba nethuba lokuqwashisa ngezifo esisebenzisana nazo ezingeni laseYurophu kanye nakwamanye amazwe nakho kubalulekile, futhi nokuthola izindlela zokuhlanganyela ezinikeziwe zokunika amandla.
UFrancesca Pirovano, I-Respiriamoinsieme
Egameni le-Asthma and Allergies Patient Association of Ethiopia, kuyasijabulisa kakhulu ukuba ngaphansi kwesambulela seGAAPP. Kunemihlomulo eminingi kakhulu yokuba yilungu:
I-GAAPP ingummeli wesiguli womhlaba wonke wenhloso yethu, ebonakaliswa emihlanganweni ebonakalayo esinayo
I-GAAPP isebenza njengebhuloho labameli bakazwelonke ukuxhumana nabathintekayo, njengezinkampani ezenza imithi, lapho iziguli zingasebenza khona ngokubambisana nazo
I-GAAPP ingumthombo wokwakhiwa kwamakhono ezobuchwepheshe nezimali.
UDejen Birhanu, I-Asthma and Allergies Patient Association yase-Ethiopia
Kuyasizuzisa kakhulu ukuba yingxenye yeGAAPP, esinika ukuxhumana nezinhlangano ezihola phambili kwamanye amazwe, futhi sikwazi ukufunda ngemikhuba emihle ezingeni lomhlaba jikelele.
Lokhu kusinikeza nethuba lokuhlonza amaphrojekthi angamasu esingabamba iqhaza kuwo. Ngaphezu kwalokho, i-GAAPP isiza ukuvuselelwa kwamazinga amasha, amathuba, kanye namathrendi esikhathini esizayo sokunakekelwa kwezempilo.
U-Armando Ruiz, I-Spanish Federation of Allergy and Airways Diseases Izinhlangano Zeziguli
Yiba yilungu le-GAAPP!
Uma ungummeli wesiguli futhi / noma usebenza enhlanganweni yesiguli yokungezwani komzimba, i-atopic dermatitis, i-urticaria, i-asthma, i-COPD noma esinye isifo somoya, sikumema ngokufudumele ukuba ube yilungu le-GAAPP - i-Global Allergy & Airways Patient Platform! Faka isicelo sobulungu bakho bamahhala namuhla.